Naghachi Data si iTunes ndabere - akwado faịlụ & Devices
Naghachi Data si iTunes ndabere: akwado Files & Devices
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụkwa ihe iTunes data mgbake ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka iTunes tupu adịkwa mkpa data, mgbe ahụ, i nwere ike agbake mkpa data si iTunes ndabere faịlụ. Ma na nke a mgbake mode bụ-enye aka karịsịa naghachi gị iOS weghaara photos, ederede ozi, kọntaktị, ndetu, kalenda mgbe ị na-data furu efu na gị iOS ngwaọrụ. Fọrọ nke nta niile data ị kwadoo gị iTunes nwere ike natara site Wondershare Dr.Fone maka iOS, gụnyere foto na igwefoto Roll, Photo Stream, kọntaktị, ozi, Message Mgbakwụnye, wdg Lelee ndepụta dị n'okpuru.
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1, iPod aka 4, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPad 2, The New iPad, iPod aka 5, iPad na Retina ngosi, iPad min, iPad Air, iPad Obere 2, iPad Obere 3, iPad Air 2
Igwefoto Roll, Photo Stream, kọntaktị, ozi, Message Mgbakwụnye, Oku History, Kalinda, Edeturu, Nchetara, Voice Memos, oziolu, Safari Ibe edokwubara, WhatsApp History, App Photos, App Videos, App Documents, WhatsApp Mgbakwụnye
Ọzọ: Naghachi Data si iTunes ndabere File